समाचार - डिस्पोजेबल स्टेराइल ट्विस्ट शीर्ष 21g-30g रगत ल्यान्सेटहरू
डिस्पोजेबल रगत ल्यान्सेटहरू
डिस्पोजेबल रगत ल्यान्सेट पोलीप्रोपाइलिन (PP) र स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको हुन्छ, नसबंदी विधि इथिलीन अक्साइड स्टेरिलाइजेशन हो, छालालाई छेड्न माइक्रो रगत संकलनको लागि क्लिनिकल आवश्यकताको लागि उपयुक्त। उन्नत टिप ग्राइन्डिङ टेक्नोलोजीले तीखो टिप सुनिश्चित गर्दछ र दुखाइ कम गर्दछ। शुद्धीकरण इंजेक्शन मोल्डिंग उत्पादन स्वच्छता आवश्यकताहरू सुनिश्चित गर्दछ।
त्यहाँ दुई मोडेल, बेलनाकार र फ्लैट छन्। ब्लड ल्यान्केटलाई 21G 23G 26G 28G 30G 31G मा विभाजन गरिएको छ। यी दुई मोडेलहरू (23G र 26G) बाक्लो सुईहरू छन् र बाक्लो वा नराम्रो छाला भएका मानिसहरूका लागि उपयुक्त छन्। यी दुई मोडेलहरू (28G,30G) सामान्य मोडेल हुन्, र यो मोडेल (31G) बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ। प्याकिङ विवरण: 100 PCS वा 200 PCS/बक्स, 20000 PCS/बक्स, 14kg/13kg।
प्रदर्शन र प्रयोग: यो उत्पादन मानव औंलाको सर्कुलेशन पोइन्ट पंचर रगत परीक्षणको लागि उपयुक्त छ, रगत संकलन कलमको साथ प्रयोग गर्न आवश्यक छ। रगत सङ्कलन सुई टिप बाँझ हुनुपर्छ।
1. रगत सङ्कलनको सुई रगत सङ्कलन कलमको सुई होल्डरमा घुसाउनुहोस्।
२. रगत संकलन सुईको सुरक्षात्मक टोपी हटाउनुहोस्।
3. रगत सङ्कलन कलमलाई निर्जंतुक गरिएको भागमा लक्षित गर्नुहोस् र प्रक्षेपण बटन थिच्नुहोस्।
4. प्रयोग पछि, सुरक्षात्मक टोपीमा रगत सङ्कलन सुईको टिप घुसाउनुहोस् र यसलाई विशेष पुन: प्रयोग गर्ने उपकरणमा राख्नुहोस्।
1. यो उत्पादन एक डिस्पोजेबल उत्पादन हो, कृपया पुन: प्रयोग वा अरूसँग साझेदारी नगर्नुहोस्।
२. प्रयोग गरिसकेपछि रगत सङ्कलन गर्ने सुईलाई रगत सङ्कलन पेनमा नछोड्नुहोस्।
3. यदि सुरक्षा टोपी प्रयोग गर्नु अघि खसेको छ भने, रगत संकलन सुई प्रयोग नगर्नुहोस्।
4. कृपया उत्पादन को जीवन भित्र प्रयोग गर्नुहोस्। 5. यो उत्पादन कुनै चिकित्सीय वा निदान प्रभाव छैन।
हामी रगतको ग्लुकोज अनुगमनमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न अधिकतम शुद्धताका साथ रगत नमूनाहरू उत्पादन गर्छौं। उच्च गुणस्तरको सुईहरू प्रयोग गरेर, ट्राइ-बेभल टिपले छालामा क्षति पुग्दा ट्रमा पंचरलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ।